I-DA-2 A3-Ukumiselwa komgangatho 1.Split Side Rails: Iindlela ze-4pcs PP ecaleni kwendlela zinika isigulana ukhuseleko ekuweni. Iplatifomu ehlaziyiweyo ye-Matress: Ukususa ngokulula kwaye kulula ukuba ube nokubulala iintsholongwane. Iqonga le-mattress linokwenza i-X-ray yebhodi yangasemva kwaye inike isigulana ukuba sikhululeke ngakumbi. Izitshixo zeBhodi yeeBhedi zeHH / F: Ukutshixwa kweebhedi zeebhedi kukhusela ukukhutshwa ngokungafanelekanga kweebhodi zeebhedi xa uqhuba okanye uphatha ibhedi. Iziqwengana zekona ezisebenzayo 5.Ukuphakamisa isibonda okanye imingxunya yokuma imingxunya 6.Izixhobo zokubamba ...
I-DA-2 A2-Ukumiselwa komgangatho oqhelekileyo 1.Split Side Rails: The 4pcs PP Rails sideways zibonelela isigulana ngokukhuseleka ekuweni. Iplatifomu ehlaziyiweyo ye-Matress: Ukususa ngokulula kwaye kulula ukuba ube nokubulala iintsholongwane. Iqonga le-mattress linokwenza i-X-ray yebhodi yangasemva kwaye inike isigulana ukuba sikhululeke ngakumbi. Izitshixo zeBhodi yeeBhedi zeHH / F: Ukutshixwa kweebhedi zeebhedi kukhusela ukukhutshwa ngokungafanelekanga kweebhodi zeebhedi xa uqhuba okanye uphatha ibhedi. Iziqwengana zekona ezisebenzayo 5.Ukuphakamisa isibonda okanye imingxunya yokuma imingxunya 6.Izixhobo zokubamba ...
I-DA-2 A1 -Umgangatho woqwalaselo 1.Split Side Rails: Iindlela ze-4pcs ze-HDPE ezisecaleni zinika isigulana ukhuselo ekuweni. Iplatifomu ehlaziyiweyo ye-Matress: Ukususa ngokulula kwaye kulula ukuba ube nokubulala iintsholongwane. Iqonga le-mattress linokwenza i-X-ray yebhodi yangasemva kwaye inike isigulana ukuba sikhululeke ngakumbi. Izitshixo zeBhodi yeeBhedi zeHH / F: Ukutshixwa kweebhedi zeebhedi kukhusela ukukhutshwa ngokungafanelekanga kweebhodi zeebhedi xa uqhuba okanye uphatha ibhedi. Iziqhoboshi zekona ezisebenzayo 5.Ukuphakamisa isibonda okanye ukumiliselwa kwemingxunya yokuma 6.Matress Holder ...